ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता : सरकारभन्दा पार्टी एकता पहिला हुने संकेत ! | newdnn.com
ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता : सरकारभन्दा पार्टी एकता पहिला हुने संकेत !
२३,आईतवार १६:३९ Sangita Rai
भक्तपुर, २३ पुस । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको धुलो उडाउँदै काठमाडौँ पुगेका माओवावादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता गरेका छन् ।
हुस्सुका कारण उडान हुन नसकेपछि सडकमार्ग भएर आइतबार नै चितवनबाट काठमाडौँ आएका प्रचण्डले बालकोट पुगेर निवासमै ओलीलाई भेटेका हुन् ।
अति नै महत्वपूर्ण मानिएको भेटवार्तामा भने कुनै ठोस निर्णय नभएको श्रोतले जनाएको छ । दुई नेताबीच जतिसक्दो छिटो बस्ने भनिएको एकता संयोजन समितिको बैठक पनि दुई दिन पर सरेको छ ।
संयोजन समिति बैठक सार्नु अर्थपूर्ण !
आइतबारको भेटवार्तापछि सोमबार बस्ने ठानिएको एकता संयोजन समिति बैठकलाई मंगलबार सार्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । किनकी ओली बुधबार नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि थाइल्याण्ड जादैछन् ।
पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन बनेको एकता संयोजन समिति बैठकमा दुई पार्टीबीच ठुला आन्तरिक जटिलता छन् । त्यसमा पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने आन्तरिक सहमति भएपनि प्रचण्डलाई एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष दिन एमाले पक्ष तयार देखिएको छैन् ।
तर माओवादीले आफुले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एउटा पद नपाए पार्टी एकिकरण गर्ने पक्षमा छैन । र यसैका लागि प्रचण्डले बैठक आह्वान र भेटवार्तालाई पातलो बनाएका छन् ।
पार्टी एकता भोलि हुने सम्भावित दुर्घटना !
आफुले चाहेको उद्धेश्य पुरा भएको र कागं्रेसभन्दा पनि ठुलो पार्टी बनेपछि एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु भोलि हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट पनि बच्न सकिने माओवादी नेताहरुको बुझाई छ ।
गुट राजनीति गरेर फस्टाएको एमालेबाट भोलिका दिनमा आफु पनि शिकार हुने निष्कर्षमा माओवादीका दोश्रो तहका नेताहरु पुगिसकेका छन् । यद्यपी यसैका कारण पार्टी एकताबाट पन्छिन नमिल्ने भनेपनि प्रचण्डको शक्ति सधै सिञ्चित भइरहनेमा पनि माओवादी नेताहरुमा आशंका छ ।
यही पेचिलो राजनीतिक अवस्थाबा माथि उठ्ने प्रयासमा लागेका वाम गठबन्धनका नेतामा तत्काल सत्ता कसरी हातमा पार्ने भन्ने अर्को चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै दुई महिना सरकार नछाड्ने पक्का पक्की भएपछि पार्टी एकता गरेरै सरकारमा जानुपर्ने जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा दुई शीर्ष नेता सहमति नजिक पुगेको श्रोतको दाबी छ ।
यसका आन्तरिक जटिलता मंगलबार बस्ने एकता संयोजन समितिको बैठकले सुल्झाएमा दुई शीर्ष नेताको सहमति कार्यान्वयन हुने दाबी श्रोतको छ ।